Emotion Management (၁) – ကိုယ့်ကိုယ် အပြစ်တင်ခြင်း – Negative Emotion and Regrets | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » Emotion Management (၁) – ကိုယ့်ကိုယ် အပြစ်တင်ခြင်း – Negative Emotion and Regrets
Emotion Management (၁) – ကိုယ့်ကိုယ် အပြစ်တင်ခြင်း – Negative Emotion and Regrets
Posted by ဇီဇီ on Jun 14, 2016 in Buddhism, Science & Religion, Society & Lifestyle | 22 comments
Emotion Management & Mindful Compassion KZ's Dairy
အမှန်တော့ ဘုန်းဘုန်းဟောတဲ့ တရားတွေ စာရိုက်ထားတာကို ရှယ်ပေး ဖတ်ခိုင်းတာက အရီးလတ် ပါ။
အဲဒီ အချိန် ကိုယ်က မြန်မာပြည်ရောက်နေတုန်းအခိုက်မို့ ဖတ်ရုံပဲ ဖတ်ပြီး ဘာမှ ပြန်မပြေါနိုင်ခဲ့ဘူးးး။
ခု ဒီ ကနေပဲ ကျေးဇူးတင်စကားပြေါရတော့မှာပဲ အရီးရေ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ တရားနဲ့ စာတွေကို ပြန်မျှလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျနော့ရဲ့ ကြက်စွပ်ပြုတ်တွေ လက်ချာတွေရဲ့ အတွေးတွေမှာလည်း တစိတ်တဒေသ သဘောလောက်ပါပါတယ်။
စိတ်ရဲ့ အပိုင်းအစ ဖြစ်ပျက်မှု တခု ကို ဆရာတော်က တရားတော်နဲ့ရော အနောက်တိုင်းက သုတေသီ သဘောတရားတွေနဲ့ပါ မျှတဟောတာမို့ သဘောပေါက်နိုင်မယ်ထင်ရဲ့။
Emotion Management ၁ က နေ ၈ အထိ ရှိတယ်။
များရင် အကုန်မဖတ်ဖြစ်မှာ စိုးလို့ အပိုင်းခွဲတင်လိုက်တယ်။
တချို့ ဖတ်ဖူးပြီးသား နာဖူးပြီးသားလည်း ဖြစ်မှာပါ။
ဇော်သန့် လောလောဆယ်ဖတ်နေတဲ့ စာအုပ် နဲ့လည်း တိုက်ဆိုင်မယ်ထင်လို့။ လောကုတ္တရာ အကျိုး အတွက် ထိ မကြည့်ရင်တောင် လူ့ အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ စိတ်ထားတတ်ဖို့ အထောက်အပံ့ဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကိုယ့် နားလည်သလို ပြေါရရင်….
ပထမ ဆုံး အပိုင်းမှာတော့ ဘုန်းဘုန်းက ရှေ့ဆောင်သွားတဲ့ စိတ်တစ်ခုမှာ အဆိုးမြင်တဲ့၊ နောင်တပါတဲ့ အရာမျိုး အတွေး မပါစေဖို့ စ ပြေါတာထင်ရဲ့။
ကျနော်တို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကို ဦးဆောင်သွားတာက အဆိုးမြင် အတွေးတွေပါ။ သူက ဦးဆောင်ပြီးလာလေ့ရှိတာပါ။အရင်လာလေ့ရှိတာပါ။ ဒါကြောင့် အောင်မြင်ရေးသော့ချက်တွေ မှာ အကောင်း အကောင်းမြင် အတွေး/စိတ် Positive Attitude/Emotion ထားရမယ်လို့ ပါတာပေါ့။
သတိများမထားမိရင် မျက်လုံးမှိတ်ပြီး တွေးမိတဲ့ ပထမဆုံး အတွေးတွေမှာလည်း အဆိုးတွေ ပါ။
အတိတ်ကို တွေးမိရင်လည်း ဆိုးတဲ့ အခြေအနေတွေကိုပဲ မှတ်မိလွယ်…
အနာဂတ်ကို တွေးရင်လည်း စိတ်ပူတဲ့ အတွေးတွေက ကြီးစိုးး..
ဒီလိုနဲ့ပဲ ရုန်းမထွက်နိုင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှု သံသရာကို ဘယ်လို ဖြတ်ရမယ်ဆိုတာ သိသင့်တာပေါ့လေ။
ရုန်းမထွက်နိုင်ရင်တော့ ဆိုးတယ်လို့ ထင်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ အတွက်…
စိတ်ဖိစီး ဒီ သံသရာက မပြေါနိုင်ဘူးးး။ ကိုယ့်စိတ်ကို အပေါ်စီးက မမြင်နိုင်ပဲ စိတ်ရဲ့ စေရာနောက်ပဲ ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားတော့မှာ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆန်းစစ်မှသာ ရှာဖွေမှသာ အဆိုးမြင်သံသရာက လွတ်မြောက်မှာပါ။
အဲဒါလေးကို ဘုန်းဘုန်းက ပြေါချင်တာလို့ နားလည်ပါတယ်။
Emotion Management (၁) – (ကိုယ့်ကိုယ် အပြစ်တင်ခြင်း)
ဘုန်းဘုန်းနဲ့ နီးစပ်တဲ့သူတွေထဲမှာ ကလေးတွေ အလိုမကျ ဖြစ်တတ်တာကို အကြိမ်ကြိမ် တွေ့ဖူးတယ်။
အဲ့ဒါတွေကို Emotion ရှုထောင့်ကနေ ကြည့်မယ်ဆိုရင် “Negative Emotion” က လွှမ်းမိုးနေတာ။ အကုန်လုံးကို dominate လုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ လောကကြီးကို ကြည့်တဲ့ “window” ဒီပြတင်းပေါက်ပေါ့။ အကုန်လုံး Negative ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Negative Emotion ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
သူများကို အပြစ်တင်တဲ့ဟာနဲ့ ကိုယ့်အပြစ်တင်တဲ့ဟာ
အမေရိကားက သူဌေးကြီးတစ်ယောက်က စီးပွားရေးလုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ မီလျံနာဖြစ်နေပြီ။ တစ်နေ့ကျတော့ ဘာသွားစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ ဟိုနေရာလေးမှာတဲ့ .. “ဘက်စ်ကား”ဆိုပါတော့ ။ အဲ့ဒီဘယ်ထဲမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ခဲ့ရင် ဒီကနေ့ဆိုရင် အကျိုးအမြတ်က ဘယ်လောက်ရှိနေပြီ။ ငါ မလုပ်လိုက်မိတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဒီခုနစ်နှစ် အတွင်းမှာ၊ ရှစ်နှစ်အတွင်းမှာ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ထိ ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုပြီး မရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့ဟာ၊ မလုပ်လိုက်ရတဲ့ဟာ။ အဲ့ဒါကို အကြောင်းပြုပြီးတော့ သူက နောင်တတွေ ဖြစ်တယ်။ သူ့ကိုယ်သူ ပြန်အပြစ်တင်တယ်။ အဲ့ဒါကို တွေးရင်းတွေးရင်းနဲ့ auto mind ၀င်လာတဲ့အခါကျတော့ နောက်ပိုင်း အိပ်မရတော့ဘူး။
အဲ့ဒါနဲ့ စိတ်ဆရာဝန်ကသူ့ကို ဘယ်လိုပဲပြောပြော…
” ဒီဆရာဝန်က ငါ ပြောတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ကွက်မှ သူကမှ မသိတာ။ သူကမှ တန်ဖိုးမသိတာ” ဆိုပြီး ဆရာဝန်ပြောတာကို သူက နားမထောင်ဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ နောက်ပိုင်းကျတော့ သူ အိပ်မနိုင် စားမရ အဲ့လိုဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးကျတော့ ဘာလေး သွားတွေ့တုန်းဆိုတော့.. သူက စာဖတ်တဲ့သူဆိုတော့ ဓမ္မပဒထဲက မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ စာသားလေး..
ဒါ သက်သေ သာဓက သုတ်ထဲမှာလည်း ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ အခု Negative Emotion ကို ကိုင်တွယ်တယ်ဆိုတာက….
ဘုန်းဘုန်း Oxford မရောက်ခင် London မှာနေတုန်းက Sunday School လုပ်တော့ ကလေးတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ ကလေးတွေက သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေကို သူတုိ့ကပြောပြတယ်။ “အရှင်ဘုရား တပည့်တော် ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူး။ Bill Gates လိုပဲတဲ့။
Bill Gates က ဒီမှာ တစ်နေ့ကို ၀င်ငွေဘယ်လောက်ဝင်တယ်။ အဲ့ဒါကို တစ်နာရီနဲ့ဆိုရင် ဘယ်လောက်ဝင်တယ်။ တစ်မိနစ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ဝင်တယ်။ ကလေးက အဲ့လို တွက်တာပေါ့။ အဲ့ဒါနဲ့ သား “ဘာဖြစ်ချင်တာတုန်း”ဆိုတော့ သူ့လို။ Bill Gates လို ဖြစ်ချင်တာတဲ့။ သူ့လိုဖြစ်ချင်တာတော့ ဟုတ်တယ်။
Bill Gates က သူ လူတွေကို အလုပ်ပေးတယ်ဆိုရင် ပထမဆုံးမေးတဲ့မေးခွန်းက ဘာအမှားလုပ်ခဲ့တုန်းတဲ့။ အဲ့ဒီအမှားကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့တုန်းတဲ့။ သူက အဲ့ဒါမေးတာ။
★ ဒီ Negative Emotion ဆိုတာ သူဖြစ်ပြီဆိုရင် စိတ်ကို အတိတ်မှာပဲနေခိုင်းတယ်။
ဒီနေ့ တနင်္ဂနွေနေ့။ ၃၁ ရက်နေ့။ မနက် ၉း၃၀။ ဒါ ပစ္စုပ္ပန်။ မနေ့က အကြောင်း တွေးနေတယ်။
မနေ့က အကြောင်းပဲ စိတ်က Auto Mind နဲ့ မနေ့ကအကြောင်းပဲ အဲ့ဒီကို ခဏခဏ ရောက်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင် ဒါ ငါ့မှာ Emotional Issue ရှိသလားလို့ ကိုယ့်ကိုယ် ပြန်ဆန်းစစ်ပါ။ Emotion အကြောင်း ရှိသလား။
ဒီ Emotion က ကိုယ့်ကိုယ် မကျေနပ်တဲ့ဟာလား။ သူများကို မကျေနပ်တဲ့ဟာလားဆိုတာ ပြန်ပြီးတော့ ကြည့်ပါ။
မဟာဗောဓိလိုင်းမှ ထုတ်လွှင့်သည့် Oxford Sayardaw ဒေါက်တာဓမ္မသာမိ (Venerable Dr. Dhammasami, Oxford Buddhavihara, UK) ဟောကြားတော်မူသော Emotion Management & Mindful Compassion တရားတော်အား အသံဖိုင်မှ စာရိုက်ပူဇော်ပါသည်။
မရောက်တာကြာလို့ လာလည်တာပါ ..
တန်ဖိုးရှိတဲ့စာနဲ့ တန်းတိုးတဲ့အတွက် မင်္ဂလာရှိပါတယ် ..
အမှန်က အနောက်တိုင်း က စိတ်ကို ချဉ်းကပ်တဲ့ သီဝရီ တွေ
သိလာတဲ့ အသိတွေ က တရားနဲ့ ပိုပိုနီးလာတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ဆီမယ် ဘာလို့ တရားအနှစ်က ကျန်ပြီး အကာပိုင်း ဘာသာရေးဘက် ရောက်နေကြလဲမသိ။
တရားခံကတော့ အ၀ိဇ္ဖာ …
အမှန်ကို မမြင်နိုင်ဘူး …
ကွန်မန့်လေးတစ်ခု ပေးလိုက်တာ ကြယ် ၃ ခု ဖြစ်သွားတယ်တော့ ….
Best Comment အစိမ်း ကြောင့် ထင်ပါရဲ့။ ဟိ။
မြန်မာတွေက..အတိတ်ကိုဆွဲဆန့်လိုက်တာများ… ဟိုဘ၀ကမကောင်းခဲ့လို့.. ဒီဘ၀အခုလိုဖြစ်နေတာအထိ…။
အဲ.. အနာဂတ်ကိုဆွဲဖြန့်ချလိုက်ပြန်တော့လည်း.. အခုလှူတာ နောင်ဘ၀မှာကောင်းဖို့ဆိုတာပဲ..။
ပစ္စုပ္ပန်မှာ.. ငုတ်တုတ်ကြီးနေပြီး.. ဘာဘာဘာမှန်းမသိ.. နောင်ဘ၀ငါ့အတွက်ရည်ရွယ်.. စွတ်လှူ…။ စွတ်လုပ်..။
ဒါကိုအရင် ဘယ်လိုချွတ်မလဲ.. လုပ်ရ..ဟောရမယ်လို့ထင်တယ်..။
နဂေ့တစ် အီးမိုးရှင်းလေး အရင် ဖြတ်ကြအောင်ညော်။
အဲဒီ အတိတ်/အနာဂတ် ကို ဟောလွန်း ပြေါလွန်းတာကြောင့် ပဲ လက်ရှိအခြေအနေမှာ နေတဲ့လူ မရှိတော့တာ ထင်ပါရဲ့။
ဆရာတော်ပြောတာကိုလည်း.. ထောက်ခံပြောပေးရသေး.။ နဂေ့တစ်တဲ့…။
ဆြာတော် ဟောနေတဲ့ နဂေ့တစ် အီမိုးရှင်းလေး အရင် ဖြတ်ပါရစေအူးလို့ပြေါတာ။
တော်ကြာ ငြင်းရင်းခုန်ရင်း အလှူဘက်ကူးသွားမစိုးလို့။
ခုရက်ထဲမှာ မဟာဗောဓိက လွှင့်နေတဲ့ စိတ်ဖြင့် ရောဂါကုသမှုဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ခြင်း (အတိအကျမဟုတ်) ဆိုတဲ့ တရားလည်းကောင်းတယ်။
အဲဒီဆရာတော် တရားတွေက အသုံးချဗုဒ္ဓဘာသာတွေ။
တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀မှာ အသုံးချပုံကို သင်ပြပေးတာတွေဖြစ်လို့ တကယ်သဘောကျတယ်။
သဂျီးကိုလည်း အဲဒီဆရာတော်နဲ့ တွေ့ပြီး ဆွေးနွေးစေချင်တာ။
အဲဒီတရားက မလတ်ပြောပြလို့ ၂ရက်စလုံး သွားနာဖြစ်ခဲ့တဲ့ တရားပေ့ါ။
(အဲ့လို သဘောတရားမျိုးကို… ဆရာတော် ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)လည်း ပြောလေ့ရှိတယ်။ )
တရားနာရင်… ရှေးခေတ်အခါက… ဇာတ်ထုပ်တွေ ထိုင်ဟောနေတာကို နာရတာထက်…
အခုလို… ခေတ်နဲ့ လျော်ညီအောင်… ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ဟောတဲ့တရားကို ပိုသဘောကျ….
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ် အပြစ်တင်ခြင်း ဆိုတာကို ဖတ်ပြီး…တွေးမိတာတော့…
ကျနော်တောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ် အပြစ် သိပ်မတင်တတ်တော့ပါလား…လို့… ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ် ပြန်တွေ့လိုက်ရတယ်။
အရင်တုန်းကတော့… တစ်ခုခုဆို..ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ် ထိုင် အပြစ်တင်နေမိတာ…
အခုနောက်ပိုင်းတော့.. အပြစ်ထိုင်တင်နေလို့လည်း ဘာမှ မထူးဘူး..ဆိုပြီး… နောင်တတွေနဲ့ ပူလောင်နေမယ့်အစား..နောက်တစ်ခါ ဒါမျိုးနောင်တ မရအောင်နေမယ်လို့ပဲ တွေးတော့တယ်။
.နောက်ပြီး ဆရာတော် ဦးဇောတိက ရဲ့ တရားထဲက…သဘောအကျဆုံး…တစ်ခုဖြစ်တဲ့…
သူများမှာ…အားနည်းချက်တစ်ခုခု တွေ့တဲ့အခါ… သူ့ကို အပြစ်တင်မယ့်အစား…
ကိုယ့်မှာ အဲ့လို အားနည်းချက်မျိုး ရှိသလား.. ကြည့်မယ်…
မရှိဘူးဆိုရင်..ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ် ကျေနပ် ဂုဏ်ယူပြီး..နောင်လည်း ရှိမလာအောင်ထိန်းမယ်။
အဲလိုလေး မကြာခဏ တွေးပြီး လုပ်ဖြစ်တယ်။
စိတ်ဆိုတာမျိုးကလည်း လွှတ်ပေးလို့ကတော့ ဘယ်ရောက်လို့ ဘယ်ပေါက်မှန်း မသိနိုင်မျိုးကိုးးး
အမလေး. . အဲဒီ negative emotion တွေပေါ့ . . . အတိတ်ကို ပြန်တွေးပြီး တနုံ့နုံ့ဖြစ် . . . အနာဂတ်ကိုတွေးပြီး အလိုအကျတာတွေ လေထဲတိုက်အိမ်ဆောက်တာတွေဖြစ် . . .ပစ္စုပ္ပန်ထဲ ပြန်ရောက်လာရင် စိတ်ဓာတ်တွေကျ . . . တရားလေးဘာလေး ထိုင်ဦးမှပါ . .
လောင်းကစား Post ကို ဝင်တင်ကာ မှ ကျုပ် ချစ်တူမ ရဲ့ တရားစကား Post နဲ့ တိုးတော့ တာဘဲ။
ဟိုဘက်က လောင်းကစားတာ “ခင်” နော်။ :-))))
.ဓမ္မပဒထဲက မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ စာသားလေး..
.အခုကိုနောက်လအတွက်ပူပန်နေတယ် (★ အနာဂတ်အတွက်လည်း မပူပန်နဲ့။)
.နောက်လဆို ကွန်ထရက် တစ်နှစ်ပြည့်ပြန်တော့မယ်…
ကိုယ်တိုင် ခံနိုင်သရွေ့ တော့ စိတ်တွေ ဆက်ဖိစီးးခံနေကြတာပါပဲ..
ခန္ဓာကိုယ် က မခံနိုင်တဲ့ အဆုံးး ရောဂါ နဲ့ အဆုံးသတ်ပြီးးးး
စိတ် က မခံနိုင်တဲ့ အဆုံးး Mentally Disorder ဖြစ်သွားးခြင်းနဲ့ အဆုံးးသတ်တာပေါ့..
သိနေတုန်းးလေးး ဖြတ်ချ လိုက်နိုင်ရင် ကောင်းးတာ ပေါ့ မိုက်မိုက်ရေ..
ကိုယ်စိတ်ပူလည်းး ရလာဒ် က ပြောင်းးမှာ မဟုတ်ရင် စိတ်မပူနေပဲ ဘာလာရင် ဘာလုပ် ရမလဲ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ထားလိုက်တာ ပိုကောင်းးပါတယ်..
ဆရာတော် တရား တွေထဲ ငရဲနဲ့ ခြောက် ဘုံ နဲ့ မြှောက်တဲ့ လက်တွေ့မပါတာ တွေ ကင်းပြီး မျက်မြင် ကြုံရတဲ့ စိတ်ပြသနာ တွေ ကို ထိန်းချုပ်နည်း တွေ ပါတာမို့ သဘောကျတာပါ။
အခု ရွှေပြည်ထဲ တစ်ချို့ ကုမ္ပဏီ တွေ က သူတို့ ဝန်ထမ်း တွေ ကို ဆရာတော် ရဲ့ တရားတွေကို နာခိုင်းနေတာ တွေ ရှိလာပြီ။
တရားခြင်း၊ မတရားခြင်း နဲ့ အကောင်း အဆိုး ခွဲနိုင်သူ တွေ အားများလာဖို့ ဘဲ လိုပါတယ်။
အဲဒီချိန် သိမ်ဖျင်း တဲ့ အတွေးအခေါ် တွေ နောက်ကျန်သွားမယ် မှန်းတာပါဘဲ။
အချိန်ယူပြီး ဖြန့်ပေးလို့ အထူးကျေးဇူးပါ ဇီကလေး ရေ။ :-)))
နောက် ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး ရဲ့ တရားတွေလဲ ကောင်းပါတယ်။
ဒီ ဆရာတော် တွေ ဟာ သူကြီးမင်း စွပ်စွဲ ပြောလေ့ရှိတဲ့ သာမာန် ယူနီဖောင်း ဝတ်တွေ မဟုတ်ပါ။
သာမာန်လူတွေ ထက် ပိုမိုပြီး သူတို့ ရဲ့ စိတ်တွေကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ကျင့်ကြံ နေသူ ဖြစ်လို့ သူတို့ ဆီက စကားများ ကို အရိုအသေပြု နာယူခြင်းသာပါ။
သင်္ကန်းရုံ ထားတိုင်း ဘုန်းကြီး မသတ်မှတ်သူမို့ ဘုန်းကြီးတရား တိုင်း ကိုလဲ နာတတ်သူ မဟုတ်ပါ။
သင်္ကန်း ကို စော်ကားလို့ ငရဲကျ လဲ ကျစမ်းပါစေကွယ်။
အတု ကို ကန်တော့ လို့ နတ်ပြည်ရောက် တာထက် ပိုပြီး ဂုဏ်ရှိပါရဲ့။
ကျနော် လည်းး သေချာ ဖတ်ပြီးးမှ
သုတ္တန် တွေ မဟောပဲ စိတ် အထူးပြု ဟောတာ ကို ကြိုက်လို့ အရီးးရေ…
ကိုယ် နားလည်သလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆန်းးစစ်ရင်းး revision ပြန် သလို ဖြစိအောင် ရှယ်လိုက်တာပါ..
ရှယ်သူ အရေအတွက် ၆၀ ကျော်ပြီ ဆိုတော့ နောက် အပိုင်းးတွေ ဆက်တင်ဖို့ အားးရှိပါပြီ..